Sunday July 05, 2015 - 13:30:23 in Maqaallo by Super Admin
Telefoonkiisa hadaad eegto waxaa ku jira magacyada hay’adaha dalka jooga oo dhan UNDP, WFP, UNICEF, SAVE THE CHILDREN, IOM, DRC, DDG, HALO TRUST, UNHCR. Wuxuu ku leeyahay maanta dhan haday isoo wacayaan xaaskaygu ma shakido oo waxay moodaa qolooyinkii wada shaqayntu naga dhexeysay. Mararka qaarkood iyadoo gacanta ku haysa ayuu soo dhacaa markaasay ula soo carartaa isagoo labisanaya oo tidhaahdaa "xabiibi IOM baa ku soo garaacday.” Markaasuu yidhaahdaa keen keen xabiibi waaba iyaga qolada aan caawa shirka kula leeyahay Maansoor Hotel.”
IOM wuxuu u bixin jiray dumarka qurbaha ka yimid. Gabdhaha dabeecadda xun wuxuu u bixin jiray HALO TRUST (hay’adda miinadda). Hablaha yar yar ee suuqa ku cusubna wuxuu u bixin jiray Save the Children. Waxaan weydiiyey oo tan aad WFP u bixisay maxaad ugu bixisay? Wuxuu yidhi habeen baan Safari Hotel u casho geeyey markaasay dalbatay laba digaag ah iyo baastadoodii oo jibisna la socoto. Intii cashada la soo wadayna waxay isku dhuuqday maraq cashada laga soo horaysiiyey iyo afar midh oo roodhi ah oo kuus kuusan.
Markaasay markii cashada la soo dhigayna tidhi "Alla hoogay soo aniga is ilaaway, huuno maad i qabatid maraqa waan necebahaye.” Wuxuu yidhi habeenka aan rabo inaan WFP aroos u raaco ama ay Save the Children house party igu soo casuunto, xaaskayga aroornimada ayaan ku idhaahdaa xabiibi maanta safar shaqo (field) ayaan Save the Children u raacayaa ee cashada ha iigu tala galin waan soo daahayaaye. Ama waxaan odhan jiray WFP raashin ay qaybinayso ayaan kormeer ku soo samaynayaa ee caawa ha i sugine iska seexo kkkkkkk.
Waxan halkaa ka arkaynaa in ninkaasi si xun u khiyaamayay gabadhiisa uu nafta la wadaagayo isaga oo habeenba naag kale meelaha kula soo baashalaya oo samaynaya waxan xalaal ahayn ama ku banaanayn diinteen islaamka, waxa uu ku cidlaynayaa guriga xaaskiisii xalaasha ahayd waxana uu doorbidaya oo uu la soo farxayaa gabadh aan sharci u banayn oo uu dambi kyu mutaysanayo. Waxaan aamisanahay in dhaqanka noocaas ahi ku soo badanayo bulshada soomalida qaarkood oo qaadanaya dhaqan xumaa ee laga soo waardiyeyay wadamada gaalada.
Waxan usoo jeedin lahaa umadda soomaaliyeed ama walaaha muslinmka ah in ay nafta dahariyaan kana fogaan wax kasta oo xaaraam ka ah una soo jiidayao cadho ilaahay iyo danbi.
Ilaahayow danbigayaga, kii walidkayo iyo ka ummada muslimiinta ahba dhaaf
Ilaahayow naga yeel kuwii dariiqa toosan raaca ee janada gala aammiiiiiiiiiin
Allaa M ahad leh
Waa qalinkii: garyaqaan C/kariim sh. Maxamuud C/laahi "suldaanka”
Phone no: 9042120